トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Features - eeg jidka oo ka mid ah hirarka ROM sida caadiga ah waa nolosha
Mashiinka Pachinko of ROM waa, muddo xoog leh, sida caadiga ah xilliga, qaybsan yahay muddada u dhacooda. Marka la barbar dhigo xilli adag oo muddo kacsan, waxaa nolosha caadiga ah oo ka mid ah sheegi adkaan kartaa. Tilmaamo gaar ah, sida xilli xoog leh oo xanaaqsan-nolosha, ay adag tahay in la garto waa sababtoo ah waa nolosha caadiga ah. In
, kaliya tusaale nooca wax u dhacaan in ROM oo ka mid ah muuqaalada nolol caadi ah, laakiin dadka bari doonaa waxa ay noqon doontaa.
in muddada caadi ah, ama weerar soo noqnoqda, ama la qabatimo noqdo si qoto dheer aan la aad u badan arki doonaa. Si aad u odhan haddii, oo aan xaqiiqda ah in aan waa this dhab hit ah, wax keliya dheh qabatimo weyn ma aha. In la eego wax soo saarka, iwm, waxa kale oo gaadho wax soo saarka sidoo kale soo baxa in ay jidka u gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, saamaynta aad rabto in aad by dareenka ugu waa-soo-saarka iyo gaaraan, sida la sheegay in super kulul.
ayaa sidoo kale waxaa ka soo baxay in noocyo kala duwan oo gaari karin waa joogto ah, oo aan ka yarayn waa wax soo saarka Atsu daran yar tahay soo baxay oo ay gaaraan. Sidoo kale, xawaaraha wareeg ilaa dhuftay, inuu noqdo ka hor iyo ka dib markii celcelis ahaan 300 wareeg, xataa kalagoynta Ghanna ah, waxaa sidoo kale waa xaqiiqda ah in hal mar ah. Xitaa haddii daafaca jiido ee hoos waqti
ah, ama in aysan sii wadin, kala duwanaansho jaaniska waa inaad sidoo kale ay dhacdo in aan la xidhay si fudud. xaalad noocan oo kale ah waxay noqon doontaa feature nolosha caadiga ah ee ROM ah. Isagoo ka hadlayay tusaale
, anigu ma qaadan in ka badan dahab maalgashi, waa xaalad in uusan xitaa ma lacag. Marka u tageen inay lid ku ah, in muddada caadi ah, ma laga yaabaa in sidoo kale xaqiiqada ah in inta lagu guda jiro joogsiga waa ay adag tahay in la fahmo.
xataa haddii ay jiraan calaamado sida nolol caadi ah, sidoo kale, sababtoo ah in lumin lahaa tartanka, waa in aad ka taxadartaa. Markaas, ee garaafka xogta ay dhacdo sida nolol caadi ah, sidoo kale aad ogaataan oo soo aragtaan garaaf line a.
line xarunta taagan ruxruxo waa ka yar ay weheliyaan shaxda line waa xaqiiqda ah in ka yar qabatimi. Oo, celcelis ahaan, waa caddayn in celiyo ama aan ka bixin. In kiiska noocan oo kale ah waxaa jira socodka xogta ah, waxaan u malaynayaa in ay suuragal tahay in uu soo galo xilliga caadiga ah waxaa laga yaabaa in la go'aamiyo in ay sare Waxaad. nolosha
ee caadiga ah waa la qabatimo, laakiin sidoo kale waa u fududahay inuu u ciyaaro maxaa yeelay yar, waxaad ka heli doontaa waxaa macquul ah inay soo galaan xilliga u dhacooda ah ka dib. Laakiin xataa haddii ay jiraan calaamadaha nolosha caadiga ah, 300 iyo haddii wareeg ah oo dheeraad ah la qabatimo ayaa raacay ama, in ay dhacdo wax soo saarka iyo gaari waxaa mar dambe la horumariyo, si ay jiraan waa wax macquul ah in uu soo galo
muddo xanaaqsan, dhaqdhaqaaqa miiska xitaa haddii aad u malayseen aad u malaynayso in wax wanaagsan si ay u sameeyaan. On lid ku ah, in ay jiraan sidoo kale waa wax macquul ah si ay u haajiraan si ay muddada xoog leh, sida caadiga ah waa muddo. Iyadoo ku xiran xaaladda ka hor la ruxruxo nolosha caadiga ah, anigu ma aan aqaan sidoo kale, in laanta.
ka day in la garaaco Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah waxaan qabaa in ay tahay xaalad xaaladda lagu xukumi karaa, ayaa noqdaan waxba kuma yeeli socodka isku day in aad ku dhuftay. Haddii Minukere nolol caadi ah si aad u wanaagsan, waxaa kale oo jira faa'iidooyin in ka akhriyi laga yaabo in mustaqbalka salka socodka.
ama Anyway oo dhan ugu faraxsanahay aan waxtar lahayn ama fikir, ama aan waxtar lahayn in ay ka fekeraan in Atsu xayawaan badeed, ka dib oo dhan, maxaa yeelay waxa ay inta badan la sameeyo si loo geeyo Marka ahaa caajis in heshay ma noqon doonto helicopter oo aan sidoo kale sii kordhaya, ma la sharqan dhakhso ah iyo closeout iyo, waa in si taxaddar leh maxaa yeelay waxaa jiri lahaa waqti lahayn in ay kubad ka dhigi soo baxay in miiska kale.